ကလိုစေးထူး: ကျနော် ပေါ်တာအထမ်းသမား
whatasad experience bro????
is it your true experiece???
Oct 22, 2006, 8:55:00 AM
ကိုကြီးစေးထူး.. ဒါဖတ်ပြီး မျက်ရည်ဝဲမိတယ် ။ နောက်ထပ် လူဘယ်နယောက်များ အဲလို ဒုက္ခတွေကြား ခံနေရဦးမလဲ မသိဘူးနော် ။
Jul 1, 2007, 12:03:00 AM